> Resource> Windows> otú nyefee iPad Igwefoto Roll ka PC
Apụghị m nyefee foto na m iPad 2 na echekwara na Igwefoto Roll m PC. Yiri ka ha na-kpamkpam leghaara mgbe mmekọrịta. Ihe ọ bụla echiche biko?
Nke ahụ bụ eziokwu. Dị ka a otu na-n'akụkụ njikwa, iTunes enweghị ike inyere gị nyefee Igwefoto Roll gị na kọmputa. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị na-ekpebi nyefee Igwefoto Roll on iPad ka gị na kọmputa maka ndabere, ị ga-mma-eji ndị ọzọ-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ.
Ebe a bụ nri otu maka gị. Ọ bụ Wondershare TunesGo (n'ihi na Windows ọrụ) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ma nsụgharị nke a iPad na kọmputa transfer eme ka i nwee nyefee iPad Igwefoto Roll na kọmputa na a nnọọ ụzọ dị mfe. Mgbe exporting, ị nwere ike ma transfer Igwefoto Roll na album ma ọ bụ hichapụ gị iPad Igwefoto Roll onwe elu ohere.
Otú nyefee foto site na iPad Igwefoto Roll na kọmputa
Download nri mbipute a iPad na kọmputa transfer na kọmputa gị dị ka ọnọdụ gị. Ebe a, anyị na-na Windows version dị ka ihe atụ. Ugbu a, na-aga site nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nkuzi n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Mee gị iPad
Ka malitere, wụnye a iPad ka PC transfer na kọmputa gị. Na-agba ọsọ ya. Nke a iPad na kọmputa transfer bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na niile iPads, dị ka iPad Obere na iPad na Retina ngosi. Jiri eriri USB na-abịa na gị iPad jikọọ gị iPad na a na kọmputa. Mgbe ahụ, gị iPad ga-ozugbo achọpụtara. Mgbe ahụ, ozi niile na ya ga-emere ke akpan window.
Cheta na: Wondershare TunesGo eji iTunes interface. Ya mere, ị chọrọ nwụnye iTunes na kọmputa gị n'ihu na-eji MobileGo.
Nzọụkwụ 2. Nyefee iPad Igwefoto Roll ka PC
Na ekpe kọlụm, pịa "Photos" taabụ. All albums na gị iPad ga-emere na nri panel. Họrọ igwefoto Roll na pịa "Export ka". Mgbe faịlụ nchọgharị windo na-egosi, ị kwesịrị ị melite a ụlọ ahịa ụzọ ịzọpụta exported Igwefoto Roll. Mgbe ahụ, a iPad ka PC transfer amalite mbupụ Igwefoto Roll. Cheta bụghị ịkwụpụ gị iPad n'oge na-ebufe usoro.
Ma ọ bụ, mgbe achọta a na ọnọdụ gị na kọmputa, ị pụrụ nanị ịdọrọ na dobe gị iPad Igwefoto Roll na ya.
Nke ahụ bụ nkuzi banyere otú nyefee Igwefoto Roll si iPad na kọmputa.
E wezụga na-edegharị iPad Igwefoto Roll ka PC, na ị na-enwe ike nyefee Photo Library na gị iPad gị na kọmputa, na Anglịkan. Ọ bụrụ na ị zọpụta multiple songs na gị iPad, ị nwere ike mbupụ music azụ iTunes n'ọbá akwụkwọ na gị PC dị ka mma. N'ihi ya, na-agbalị a iPad na kọmputa transfer Iji nweta ihe mere!
Na-ekiri ndị Video maka PC ka iPhone Nyefee
Ụzọ kasị mma ọkụ Windows 10 Insider Preview ka USB Flash Drive